သဒ္ဓါလှိုင်း: ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ်
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:06 AM
Merry X'mas & Happy New Year ပါရှင်
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ... X'mas နဲ့အတူ လာမယ့် Happy New Year တွင် ချမ်းမြေ့သုခရပါစေဗျာ ... မသဒ္ဓါလှိုင်းရဲ့ စာတွေက ဖတ်ရတာ လူတိုင်းအတွက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်ဗျာ ...
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ကူးရည်ရွယ်သမျှ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗျာ..။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ....
အေးချမ်းတဲ့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ ဆောင်းအငွေ့အသက်လေးနဲ့အတူ ပျော်ရွင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေမမရေ...
ငြင်ငြင်သာသာ လေးနဲ့ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်...
အရမ်းနှစ်သက်မိတဲ့ တဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ မိုးစက်တွေ အောက်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း စဉ်းစားမိတာက တဖွဲဖွဲ ကျနေတဲ့ နှင်းတွေ အောက်မှာ လမ်းလျှောက်ရရင် ဘယ်လို နေမလဲလို့ ...
ခုနောက်ပိုင်း ခရစ်စမတ်တွေကတော့ ပြေးရင်းလွှားရင်းနဲ့ ကုန်လွန်ခဲ့ရတာများပါတယ် အစ်မရယ်...
သေသေချာချာလေးကိုဖတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ...Like ခလုတ်လေးသာရှိရင်...အကြိမ်များစွာ ကလစ်လုပ်မိမှာအသေအချာပါပဲဗျာ....
စာအရေးကျဲတဲ့ မမ.. တဂ်ပိုစ့်လေးရေးပေးတာ ပျော်သွားတာပဲ.. :D :D :D
မမရေးတဲ့စာထဲမှာ မျှောသွားတယ် :)
ခစ်စမတ်မှာ ကံကောင်းပါစေ အမ
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစ မသဒ္ဓါရေ...
ကျွန်မရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်လေးကို ဆက်လက်တက်ဂ်ပေးတဲ့ အစ်မအဖြူရောင်နတ်သမီးနဲ့ ညီမကန်ဒီကြောင့် စာရေးသိပ်ကောင်းတဲ့ မသဒ္ဓါရဲ့ ပို့စ်လေးကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ မသဒ္ဓါကို တက်ဂ်ဖို့ ကျွန်မ မေ့လျော့ကျန်ခဲ့ပါလိမ့်။ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်း)။ မသဒ္ဓါ တမ်းတတဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေလည်း ပြည့်ဝပါစေ၊ နှစ်သစ်မှာ ချမ်းမြေ့ပါစေလို့...။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ္စမတ် အားလပ်ရက်လေးဖြစ်ပါစေနော်
သဒ္ဓါရဲ့ ဆန္ဒတွေလည်း အမြန်ဆုံးပြည့်ပါစေ
ကမ္ဘာမြေကြီးလည်း စစ်မက်ကင်းစင်စွာ ငြိမ်းအေးပါစေလို့နော်။
ညီမက ခံစားမှု ကောင်းတယ်နော်။ စာရေးလိုက်ရင် စာထဲမှာ ခံစားမှုအနုပညာတွေ ပါပါနေတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရင်း အလွမ်းဓါတ်တွေ ခံစားမှုတွေ ကူးစက်စေတယ်။
အစ်မရဲ့ဒီပို့စ်လေးက လွမ်းစရာ၊ကြည်နူးစရာနဲ့ ဖတ်ရတာ
ဖတ်ရတာ ခံစားမှုတွေအပြည့်အဝ စီးဆင်းစေတယ်
Merry Christmas and Happy New Year ပါ ညီမရေ။
ပျော်စရာ ဒီဇင်ဘာဖြစ်ပါစေဗျားးးး)း)
Mxmas & Happy New Year ပါနော်
Merry Christmas and Happy New Year!!! sis!!
အားလပ်ရက်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ...း)
ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့....... သီချင်းလေးညည်းချင်တာ... အကျယ်ကြီးအော်ပြီးတော့လေ... ဂစ်တာကြီးကို ရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ပြီးတီးး..... မျက်လုံးကြီးကို စုံ မှိတ်... အကျယ်ကြီးအော်ဆိုပစ်ချင်တယ်.... သူ ကြားကြားမကြားကြား.............
အချစ်ရယ် အလွမ်းတွေ တစ်ဖွဲဖွဲကျ သိပ်သတိရ.....................